Dhallinta hanaqaaday oo "hammadooda ay hoos u dhacday" - BBC News Somali
Image caption Wax niyad ah looma hayo xiriirka gogosha
Unugyada ku jira jirka bani'aadamka ee hammada kordhiya waxay hoos usii dhacaan marba marka ka dambeysa ee uu qofka sii weynaado.
Sidaas awgeed dhalinyarada ayaa lagu tiriyaa inay yihiin kuwa waqtiga, awoodda iyo niyadaba u haya xiriirka gogosha.
Laakiin daraasad laga sameeyay dalalka Britain iyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in jiilasha cusub ay u muuqdaan kuwo aan daneynin xiriirka gogosha, balse ay ka door bidaan inay filimada daawadaan ama ciyaaraha internet-ka isku mashquuliyaan.
Diidmada xiriirka gogosha ee dalka Mareykanka
Cilmi baaris ay sameysay Xarunta daraasaadka qaran ee jaamacadda Chicago ee dalka Mareykanka ayaa lagu qeexay in ragga galmada sameeya ee waddankaas ay aad uga yaryihiin sidii hore.
Daraasaddan oo laga dhex sameeyay bulshada ayaa si fool-ka-fool ah loogu wareystay dadka dhalinyarada ah, waxaana si joogto ah loo soo waday tan iyo sannadkii 1972-kii.
Qeybtii ugu dambeysay ee daraasadda ayaa shaaca looga qaaday in 23% dadka qaan gaarka ah ay sheegeen inaysan galmo sameynin 12-kii bilood ee lasoo dhaafay, tiradaas ayaana laban laab noqotay 10-kii sano ee lasoo dhaafay.
Dadka ku nool Britain oo yareeyay xiriirka gogosha
Image caption Ragga iyo dumarka ayaa sidoo kale waqtigooda ku qaata baraha xiriirka bulshada
Britain qudheeda waxaa aad hoos ugu dhacay xaddiga dadka xiriirka ku sameeya gogosha, arrintaasina waxay saameysay ragga iyo dumarka ay da'dooda yartahay iyo kuwa waayeelka ah labadaba.
Daraasad uu goor dhow soo saaray wargeyska arrimaha caafimaadka ka faallooda ee British Medical Journal (BMJ) ayaa lagu soo bandhigay isbaddalka ku yimid hannaankii nolosha.
Tan iyo sannadkii 1990-kii waxaa daraasadda lagu wareystay dad ay tiradooda kor u dhaafeyso 45,000 oo ruux, kuwaasoo wax laga ogaanayay noloshooda gaarka ah.
Maxaa dadka ka celinaya Hammada?
Image caption Inta badan dhalinyarada ayaa ku mashquula daawashada filimada
Khubarada cilmi baarista sameysay iyo dhakhaatiirta ayaa sheegay in hoos u dhaca ku yimid xiriirka gogosha uu yahay mid si joogto ah u socday saameynna ku yeeshay guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshadii horay xiriirkooda gogosha uu wanaagsanaa.
Waxay sheegeen in jiilasha soo koraya intooda badan ay go'aansadaan inay iska joogaan iyagoo aan jirtooda la taabanin.
"Arrintani waa mid si buuxda waxyaabo badan uga badashay nolosha qeybaha kala duwan ee bulshada 50-kii sano ee lasoo dhaafay", waxaa sidaas yidhi barfasoor Simon Forrest, oo ka tirsan waaxda caafimaadka iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Newcastle.
Barfasoor Forrest ayaa u maleynaya sababaha arrintan keeneysa in mid ka mid ah ay tahay dadka oo intooda badan dajiya qorshe waqti dheer ah oo ku aaddan sida ay noloshooda ka yeelayaan.